Sida loo Play regelingen on Android Qalabka Si fudud
> Resource > Android > Sida loo Play regelingen on Android Devices
Marka ay isku dayaan in aad wareejin regelingen audio files si telefoonka aad Android for loo maqli karo, ama marka aad isku dayaan in ay ciyaari Farriinta voicement regelingen ku lifaaqan in saxafadeed dadka kale, waxaad ka heli doontaa Android ma taageeri karaan nooca file this. Waa hagaag, waxa aad sameyn karto haddii aad si xun u doonayo inaan u ciyaaro files regelingen on qalabka Android ay ku jiraan casriga ah iyo kiniiniyada? Maqaalkani waxa uu xaliyo doona dhibaatadaada.
Waad xoog leh lagula taliyey in la badalo regelingen in Android qaabab natively taageerto iyadoo la isticmaalayo qalab awood badan. Taasi waa sababta. Ka sokow arrinta ah in aynan, tani waxaa laga yaabaa in ay u badan tahay sidoo kale waxaa ka mid ah ilaalinta DRM in files regelingen aad. Labada keeni doonaa iPhone ee u gudan karin inuu ciyaaro files regelingen. Si kastaba ha ahaatee, ciyaaryahanka regelingen u Android ah ma ciyaari karo files regelingen la ilaalin DRM. Sidaas, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waxaa halkan soo bandhigay, oo si fudud oo dhaqso leh arrimaha labada qaban kara. No arrinta nooca files regelingen aad qabto (DRM ama Non-DRM regelingen), waxaad iyaga ka ciyaari karaa qalabka Android iyadoo wax dhibaato ah oo isticmaalaya app this.
(Fiiro gaar ah: version Mac la files regelingen DRM ma qaban karo.)
1 Import regelingen files si regelingen si Converter Android
Tag bar menu barnaamijkan ka dib markii aad u luanch, ka dibna waxaa riix Add Faylal ay fursad u dhirtuba aad PC inay ku shuban files regelingen aad rabto in aad ka. Habka labaad waa in la jiidi oo hoos u files regelingen aad ka your computer si ay leeg- tahay diinta this app ee.
First of dhan, pup ilaa tan app ee qaab saarka liiska adigoo gujinaya image qaab dhinaca midig ee suuqa kala this. Marka labaad, waxaad tagtaan dalka "Device" category ee soo socda liiska qaabka wax soo saarka. Halkan, waxaad arki kartaa dhammaan qalabka Android oo caan ka mid yihiin. Kaliya dooro aad model Android.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan heli karin model Android aad ee liiska saarka this app ee, waxa kale oo aad dooran kartaa MP3 format sida wax soo saarka, u MP3 waxaa si balaadhan oo ay taageerayaan qalabka Android ugu. Si aad u samayn, kaliya aad u tag "qaab"> "Audio"> "MP3" halkii.
3 Play regelingen on Android
Tag dib u furmo suuqa diinta barnaamijkan ayaa, qaybta hoose dhinaca midigta ah oo, waxaa jira button badalo ah. Just waxa guji si ay u qabtaan regelingen in Android diinta. Dhawr daqiiqo ka dib, diinta kusoo dhamaan doono. Hadda, riix ikhtiyaarka Folder Open hoose ee suuqa si ay u helaan wax soo saarka files audio. Ugu dambeyntii, lagu xiro qalabka Android aad si aad u computer via cable, socda, nuqul ka wax soo saarka files audio in qalab loogu talagalay loo maqli karo.